Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Defensive Genius kasị mara aha na aha njirimara “Iceman“. Ihe omuma anyi bu Victor Lindelof Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere obi ya na bọl nke rụpụtara ya aha ahụ bụ 'Iceman'. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Victor Lindelof's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Ọnọdụ Tupu Amumu
Na-amalite, ụbọchị ọmụmụ ya nwere echiche ziri ezi banyere oge. Ọ bụ ụbọchị nne na nna ya maara na ọ ga-abụ ndị ngba ama bọọlụ. N'ụbọchị ahụ, 17th nke July 1994, nne mama mama mama Victor Lindelof, Ulrica nọ n'ụlọ ọgwụ ya na di ya nke na-eme ihe dị iche dịka ọ na-ele anya, nke dị iche iche, nri?
Ee, anyị pụtara, ya nwa aga ịmụọ. Enweghi otutu ihe kariri nke a, nri?
N'ezie, mgbe Victor Lindelof batara n'ụwa a, nna ya jupụtara n'ọ withụ. Na-awụ akpata oyi mgbe a mụsịrị nwa ya, enye ama ọdọhọ ete;
Biko, biko enwere ike ịhụ TV ugbu a ?.
Mama Victor lepụrụ anya ya ọchị na ọchị, n’ihi na ọ maara ihe ọ pụtara n’ajụjụ ahụ dị umeala n’obi. Ọ dị ka,
Ma nna Victor zara;
"Amaara m, amaara m… na ọ bụ oge na-ezighi ezi, mana ha na-amalite ibuga ntaramahụhụ."
Ugbu a, anyị na-ekpughe ihe omimi nke ụbọchị ahụ. Ọ bụ ụbọchị 17th nke July 1994, ụbọchị nke 1994 World Cup Final n'etiti Brazil na Italytali, na Pasadena, California, USA. Victor Lindelöf hụrụ oge nke mbụ ya tupu oge ntaramahụhụ ikpeazụ n'etiti Brazil na Italytali.
Ọ bụ ụbọchị kacha njọ Roberto Baggio si ndụ. Ụbọchị ọhụhụ ahụ mere ka Ịlaịja kwụsị iko ụwa. Lee n'okpuru;
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mbido
A mụrụ Victor Lindelof na 17th nke July 1994 nne ya, Ulrica Lindelöf na nna amaghi ama na Västerås, Sweden. Ọ tolitere n'ụlọ nne na nna ya na Vasteras nke bụ obodo ise kachasị na Sweden. Ọ bụ nwa nke abụọ n’ime ụmụ nwoke anọ nne na nna ya mụrụ.
Site na Broken Home: Oge Victor dị na nwata nwere nsogbu mgbe nne Ulrica na nna Jorgen mebiri mgbe ọ ka dị obere. Mama ya weghaara ọrụ nke ilekọta ụmụ ya mgbe nna ya gosipụtara nlekọta site n'ebe dị anya. Victor n'onwe ya siri ike karịa ka ọ na-echekwa ibu ọrụ nke ilekọta ụmụnne ya mgbe nna ya hapụrụ ezinụlọ ha, ọkachasị ụmụaka abụọ. Dị ka akụkọ si kwuo;
"Ọ mere ka o tolite ma eleghị anya ọ bụ n'ihi gịnị ka anyị ji ahụ akụkụ a nke tozuru okè taa."
N'ịbụ ndị na-etolite, ụmụntakịrị nwoke nile mụtara otú e si egwu bọlbụ ọnụ. Ka Victor na-etinye ya;
Nna m ga-anọkwa ya, mana onye zụlitere anyị bụ mama m. Ugbu a, anaghị m achọ ka nwa nwa m nwanyị nọ ebe a, ma ana m agwa gị, na-enweghị ya, agaraghị m aghọ ndị ịgba egwu. Enweghị ohere!
Mgbe Victor dị afọ ise, mama ya nyere ya aka n'egwuregwu na-amalite site na onyinye. Ọ zụtara ya onye nchebe a Fabien Barthez, Onye na-eche nche na France bụ onye ghọrọ onye a ma ama mgbe 1998 FIFA World Cup.
Na mberede, Victor chọrọ ịghọ Barthez ka ọ malitere ịmụrụ ya. Ọ ga-apụ n'èzí na-atụba onwe ya n'ime apịtị mgbe ọ na-agbalị iṅomi nkwụsị dị egwu nke onye na-eche nche nke French.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Ka ọ na-enwe obi uto na ihe ndozi ya, nne Victor weghaara nhọrọ nwa ya nwoke ịhọrọ ọrụ. O kpebiri ịzụta nwa ya a Zidine Zidane ngwa. Ozugbo ahụ, Victor chọrọ ịbụ Zizou. Ọ malitere igwu bọọlụ na mpaghara obodo ya ebe ọ malitere ịmụ etu esi aga njem dị ịtụnanya. Ikebịghike, ekikere esie ama akabade edi ndap. Mgbe ndị mmadụ jụrụ ya ihe ọ chọrọ ịbụ mgbe o tolitere, Victor ga-ekwu ozugbo;
"Achọrọ m ịbụ ndị nrịba ama."
N'oge ahụ, ọ dịghị onye ji ya kpọrọ ihe n'ezie. Na nzaghachi, ndị jụrụ ya ga - ekwu;
“Aw, nke ahụ dị ụtọ, mana ịgba bọọlụ abụghị ezigbo ọrụ, ọ bụ?
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Na-emeri uche
Njem njem bọọlụ Victor bidoro afọ ise na IK Franke, obere klọb napụrụ obodo dịpụrụ adịpụ. Mama ya bụ onye kpọrọ ya zụọ mgbe papa ya na-anọghị. Dika nwatakiri, onye nkuzi ntorobịa ya huru ya dika “ihe pụrụ iche"N'ihi"ụkpụrụ omume iji melite"Na"ịkpọasị nke ọdịda".
Na-emeghachi omume na ọnọdụ na-efu: Mgbe ọ dị afọ asatọ ma ọ bụ itoolu, Victor weere ntaramahụhụ ikpe ikpeazụ ahụ n'otu ebe ọkpụkpụ ikpeazụ ma kụọ bọl ahụ n'elu mita ise. O wutere ya nke ukwuu na ọ gbagara n'otu ọhịa dị nso.
Onye nchoputa ya choputara ya mgbe o nokwasi n'elu osisi ebe o tiri mkpu ma tie mkpu. Dị ka onye nchịkwa ya si ede ya;
"O chere na ya ahapụla onye ọ bụla, m wee mee ka Victor dị jụụ n'ikwu na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha were iwe. Ma ọ chọrọ imeri mgbe niile. "
Victor kwenyere na ọ ga - ekwe omume imeri trophies dị ka mama ya mere ka o kwere. Nke a mechara mee.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Afọ ndị gara aga
Lindelof hapụrụ ụlọ ọrụ, IK Franke bụ agadi 13 maka ndị Vasteras IK na-achị obodo tupu ndị isi obodo ya bụ Vasteras SK hụ ya. N'oge na-adịghị anya, ọ malitere igwu egwu ya na ndị okenye dị ka onye etiti Central Central na nkewa dị iche iche ebe o mepụtara ngwa ngwa.
Atụmatụ Victor bụ ịga nnukwu ụlọ ọrụ na Sweden mgbe e mesịrị. Otú ọ dị, ọ bụ onye na-elekọta ya ka ọ na-aga maka njikọ ọzọ ka ukwuu. Onye ọrụ Victor mechara kpọọ Benfica oku. Mmasị Benfica bịara juru Lindelof anya nke bụ nanị 17 n'oge ahụ ma ka na-aga akwụkwọ. N'okwu ya;
Ana m ebi n'ụlọ ma na-aga akwụkwọ. Amaghị m ma ọ bụrụ na m ga-ewere onyinye ahụ, ya mere mụ na nne m na nwanne m nwoke nke tọrọ m na-agba ọsọ site na uru na nkwekọrịta.
Ndị a bụ Pros na Cons nke Victor na-akpọ mgbe ọ na-akpọ Benfica.
Uru: Benfica bụ nnukwu ụlọ ọrụ na Portugal. M ga-egwuri egwu n'egwuregwu kachasị mma ma rụọ ọrụ na ndị nkụzi ka mma. Enwere m ike ịnweta mgbawa na ndị mbụ.
ọghọm: Aga m aga Lisbon. Naanị. Agaghị m ama onye ọ bụla. Agaghị m asụ asụsụ ahụ. Enwere m ike ịnwụ dị ka ụfọdụ ndị enyi m, bụ ndị kwagara mba ọzọ mgbe m dị afọ ma nwee ọtụtụ nsogbu. Ndi mmenen̄ede mma ndinam emi?
Ebe ọ bụ na ọ maghị nke ọma banyere ya, mama Victor gakwuuru ya wee sị;
"Nwa m, I ga-akwa mmakwaara ma oburu na i gwaghi ee?"
Na mberede, Victor ghọtara na ọ ga-anabata nkwekọrịta ha. Otu awa mgbe e mesịrị, ọ kpọrọ onye ọrụ ya ka ọ kwadebe maka njem ahụ. N'ihe dịka izu abụọ ka e mesịrị, Victor nọ na-aga Lisbon na ọbịbịa ya na-abịa.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -U-Tụgharịa
Dị ka Victor si kwuo;
Echere m na mama m nwere obi ike banyere ihe niile, ma n'echi ya, ọ malitere ịkwa ákwá. Ọ na-enwe obi ụtọ n'ebe m nọ, ma o siri ike ka ọ hapụ m ka m laa.
Otú ọ dị, ọ bụbeghị oge maka Victor dị ka Benfica nyere ya nhọrọ mgbazinye ego laghachi mba ya. Ịla azụ: Victor laghachiri igwu egwu dị ka onye na-agbachitere Västerås, klọb mbụ ya maka ọnwa isii mbụ nke ogo ọrụ ya. O nyeere ụlọ ọgbakọ ya aka inweta ọkwalite na ọkwa nke abụọ nke Sweden. N'ịbụ onye tozuru okè n'oge ọkọchị nke 2012, N'ikpeazụ, ọ laghachiri Lisbon naanị ya. Oge a, ọ dịghị tiketi ịlaghachi.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Na-aga na-esi ike
Mgbe ọ kwagara Lisbon ịbanye na Benfica, oge bịara siere Victor ike. Site na enweghị ọrụ, ịnọ n'ebe dị anya site n'ụlọ, na enweghị ike ịsụ asụsụ ahụ bụ naanị ihe kpatara ya ka ọ bụrụ owu. N'okwu ya;
Ọbụna taa, enwere m ike ile anya na ụlọ ahụ dị ka a ga-asị na m ka bi n'ebe ahụ. Enwere m ike ịhụ obere TV ihuenyo ... tebụl na-acha uhie uhie ... ákwà mgbochi uhie ... mbadamba ihe mgbochi ebe m nwere ike ịhụ ọkwa ọzụzụ ... ihe ndina na-acha uhie uhie ... na ihe nkpuchi siri ike ka i wee nwee ike ihi ụra n'ala.
N'ala mgbe ahụ, mgbe ọ na - anọkarị, Victor nile bụ ịkpọ mama na papa ya na Skype ma na-ekiri Ntinye, usoro ihe nkiri telivishọn nke America. Obi dị m ụtọ na ọ mesịrị chọpụta enyi nwanyị nke anyị ga-eme ka ị gụchaa.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Enyemaka Zlatan
Zlatan Ibrahimovic otu ugboro rịọrọ onye agbata obi ya amara. Ọ gwara onye nwe ya okwu Jose Mourinho na echiche nke ịbịanye Victor ka ya na ya rụọ ọrụ na obere oge.
Ebumnuche, ọrụ ndị Swedish ha nwere ike ọ bụ nanị na ha nwere ihe karịrị ya, ya na Zlatan na-alọta mgbe Euro 2016 gasịrị. Victor Lindelof nwere mmasị Zlatan nke nyere ya aka ịbanye United.
Na okwu nke Zlatan;
"Victor dị mma maka United. Ọ dị ya ihe ọ chọrọ na ihe ọnọdụ ahụ na-ekwu. Ihe ọ bụla ọ họọrọ, ọ ga-abara ya uru, "
Onye isi United Jose Mourinho n'agbanyeghị inweta ndụmọdụ Zlatan ga-eme nyocha nke aka ya iji mata ezinụlọ Victor Lindelof, ndụ ya, ụdị ya na ụzọ ọrụ ya. Na njedebe, ndị Sweden mechara bịa United. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
Nye Victor, ọdịiche dị n'agbata Sweden na Portugal enweghị ihe ọ bụla kemgbe oge ọ chọtara onye ji ya ihe niile. Dị ka n'oge ederede, mmekọrịta chiri anya na ntọala siri ike dị n'etiti Victor na Maja, onye esere n'okpuru.
Mmetụta kasị mma n'ụwa ha bụ n'ezie ịmara na ha na-echere ibe ha ihe ọ bụla.
A bit banyere Maja Nilsson: Maja bụ blogger onye na-ere ahịa ma na-ede maka Swedish blog Femme. Ọ bụ nnukwu onye ọrụ nke Instagram na Twitter, ndị a bụ nyocha ihu ọha ọ na - eji na - egosipụta nkwado ya maka Lindelof na ọrụ ya. Ndị enyi abụọ ahụ zutere mgbe ọ nọ na Benfica.
Mgbe Victor Lindelof kwagara United, o kpebiri ime ya site n'ịkpọsa njikọ ya na enyi ya nwanyị bụ Maja Nilsson. Victor gbara ajụjụ ahụ mgbe ha abụọ nọ na ezumike na Maldives. Ọ bụ Maja, nwanyị na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na-ekwupụta ọkwa na Instagram na ya na Lindelof na-emekọrịta ọrụ ugbu a. Ọ kesara foto nke mgbanaka ya na-acha ọkụ nke Lindelof doro anya.
Ndị enyi abụọ ahụ kpochapụrụ ụbọchị ndị ahụ na nchikota mara mma na Sweden. Ọ bụ ememe ebe ọ bụ nanị ndị ezinụlọ ya na ezi ndị enyi bịara.
Nwunye lụrụ ọhụrụ nke Lindelof dere na Instagram, ya na nwunye na nwanyị na-alụ nwanyị snap nke kwuru;
“Ọ na-agụsi m agụụ ike ịbụ nwunye gị kemgbe oge mbụ m hụrụ gị. Gwa Mr na Mrs Nilsson Lindelöf. ”
Maja abughi ihe nturu uzo ozo maka Sweden na United fans n'ihi akuko ndi ozo banyere Lindelof. Ha na-enwe mmekọrịta ebe nkwurịta okwu anaghị akwụsị.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -A Gamer egwuregwu
Victor Lindelof hụrụ egwu ịkpọ oku. Ọhụụ ya na egwuregwu ahụ na-aga ruo ya na-eme ka ya na ya nwee mgbakọ gaa na egwuregwu. Mgbe ọ nọ n'ụlọ, ọ na-egwu onwe ya ma ọ bụ na ụmụnne ya abụọ. N'okwu ya;
"Anyị na-egwuri egwu ọnụ. Ọ bụ ihe ntụrụndụ dị ukwuu ịnọdụ ala, ikwu okwu, ma kpọọ cod ka oge na-agafe ntakịrị, "
Ị maara?? Victor mgbe ọ na-ekwu na nwunye ya na-agbaso COD: Nke a dị ka Maja Nilsson Lindelof si kwuo;
N'abalị ọzọ, Victor siri ọnwụ ka m pụọ ọgwụ ụra nke m mere. N'echi m mụtara na ọ na-ehi ụra abalị niile na-akpọ ọkpụkpọ ọrụ ka m na-ehi ụra. "
Maja kwukwara ekwenyeghi: “Ọ na-enye m ọgwụ ike maka COD !!”
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ na -Ọnwe Onwe Onye Nweta
Victor nọ na nwunye ya bụ Maja Nilsson ka ọ hapụ ihe osise ya. Ọ na-ekpuchi mkpuchi ya na ndụ ya, na-ekiri ụfọdụ ihe ihere nke onye agbachitere Swedish. Nke mbụ bụ na ọ na-eguzo na oche oche kichin iji rute ọmarịcha kpụkọrọ ọnụ ya nke o ji zoo n'elu shelf nke kichin kichin.
Foto nke abụọ na-ekpughe nwoke ya nke a na-ahụ maka igwu egwu egwuregwu kọmputa na ụlọ ya gbasasịrị mgbe ọ na-eme ákwà nsacha ahụ.
N'adịghị ka ndị egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ anyị dere maka ha, foto ndị a gosipụtara oke nghọta n'ime Victor Lindelof Personal Life. Ọ zara otu ihe dị ya n'obi banyere nwunye ya na-etinye eziokwu banyere ndụ onwe ya na-ekwu;
"Ọ bụ ya Twitter na ọ na-atọ ọchị. Ọ ghaghị ime ihe ọ chọrọ. Ọ na-amasị m ịkwa m ọchị na nke ahụ dị mma. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chere na ọ dị mma, ọ ga-eme ya. "
FAJỤ NA-ECHI: Daalụ maka ịgụ Victor Victor Lindelof Child Story tinyere nkọwa eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Akwụkwọ akụkọ Swedish
Bọchị gbanwee: Mee 12, 2021
Bọchị agbanweela: June 13, 2021